Liiska Hubinta Udirista E-maylkaaga Ugu Dambeeya iyo Dhamaystiran! | Martech Zone
Liiska Hubinta ee Udiristaada Dhammaystiran iyo Dhamaystiran ee Iimaylkaaga!
Khamiista, Sebtember 18, 2014 Khamiista, Sebtember 18, 2014 Douglas Karr
Marnaba ma guul darreysato… qiyaastii hal mar usbuucii waxaan ku helayaa emayl qurux badan sanduuqa sanduuqa ay ku qoran tahay FNAME ama isku-darka sawirro madhan oo aan lahayn qoraal beddel ah. Ama aniga ayaa ku hela muuqaalka isha oo leh sawirro dawakh ah. Ama waxaan ku furaa taleefankayga gacanta mana aqrin karo sababtoo ah emaylka moobiilku kama jawaabin.
Emailku waa ganacsi culus… waa ogeysiis riix ku saleysan riix ah in meheraddaadu ay ku riixeyso wejiga macaamiishaada. Sanduuqyada emayllada ayaa buuxsamay qof walbana wuxuu raadinayaa cudurdaar si uu u fududeeyo culeyska oo uu uga baxo. Wax badan ma qaadanayso in lagaa xayiro, lagugu tuuro galka 'SPAM', lagaa masaxo xitaa ka hor xitaa inta aan la furin, helitaanka diiwaangelinta - ama kan ugu xun - ee lagu soo sheego sida SPAM.
Kooxda ku jirta Email Monks waxay mar kale ku jiraan, talo bixin gelinta fiidiyowga emaylka tan - a liis warbixineed oo dhameystiran oo loogu talagalay soo diraha emaylka si aad u dhex marto ka hor intaadan gujin dir!
Waa waqtigii aad u diri lahayd emayl macaamiishaada oo aad ka baqeyso taabo dir maxaa yeelay ma hubtid inaad wax walba si sax ah uheshay, laakiin ha ka welwelin inay suufiyadu u soo gurmadaan mar kale! Iyagoo ganacsiyada sheegaya inay sameyn doonaan kordhin isticmaalka suuqgeynta iimaylka sanadka 2014, waxaa lama huraan ah in la helo liis hubin oo cad oo la raacayo ka hor inta aanad DIRIN. Marka waa kan kuu dhammaystiran!
Liiska hubinta wuxuu kugu dhex marayaa gudbinta emaylka, ku soo dir iimaylka macaamiisha, Falanqaynta sanduuqa, iyo fiirinta furan si loo hubiyo in wax waliba u muuqdaan kuwo fiican oo shaqeynaya ka hor intaadan dirin! Hadaad jeceshahay xitaa waad awoodaa kala soo bax nooc daabacan si aad u fadhiisato miiskaaga kugu xiga!
Tags: U hoggaansamida SPAMkaraa-spamliiska hubintafalanqaynta emaylkaiimaylka falanqaynta ololahaliiska hubinta emaylkaku soo dir iimaylka macaamiishaliiska hubinta gudbinta emaylkafarriinta emailkaemail qaabaynta htmlemaylka sawirka alt tagsxiriirinta emaylkaemail u eegis furanshaqsiyeynta emaylkaemayl qoraal cadtaariikhda jadwalka emaylkaiimaylka qoraalka farriintaemayl badhamada wadaag bulshadaImtixaanka emailkakhadka mawduuca emaylkaemayl ka saar cinwaankaaragtida emaylka ee internetkaemayl saacaddiibaka cinwaankasawir alt tagsqor nadaafaddaliiska liiskacaddaynka jawaab cinwaankakhadka mawduucasi wax looga qabto
7da Fure ee Iibinta Ganacsiga Yaryar iyo Suuqgeynta
Suuq-geynta Agile waa Evolution, Maahan Kacaan, iyo Waa maxay Sababta Waa inaad Qaadataa